Ngwa - Bezzia | Bezzia
Emezu Ha niile bụ ihe ndị ahụ nwanyị nwere ike iji mezue ihe nlereanya ọ na-eyi otu ụbọchị. Ọla ntị, akpa, ọla, eriri ma ọ bụ okpu, nke na-emetụ uwe anyị aka na ọtụtụ oge, na-eme ka anya niile na-ada anyị.
Dị ka n'akụkụ ndị ọzọ nke ụdịAnyị ga-ekwu maka ngwa na-enyocha ike ha yana otu ha nwere ike isi nye aka gosipụta anya, na-amata ọdịiche dị n'etiti ndị mara mma na ndị na-abụghị. Na mgbakwunye, anyị ga-egosi gị ihe atụ dị iche iche iji hụ ma ọ masịrị gị na ndụmọdụ iji jikọta ha.
A ga-enwe oge iji nyochaa ndị a ma ama na mpaghara a ma nyochaa ụdị ha.
Enwere ngwa ndị bụ isi yana ngwa ndị na -ewu ewu bụ ihe anyị ga -ahụ n'oge ọ bụla. Mana na nke a…
Mgbe anyị matara na anyị esoghị gị kerịta atụmatụ Malababa n'afọ gara aga, anyị chọrọ idozi ya….
Chọpụta akpa akpa site na Zara nke na-azacha
por Susana godoy eme Ọnwa 3 .
Zara na-eju anyị anya mgbe niile site na usoro echiche dị anyị mkpa n'oge anyị taa. N'ime ha niile ...
Na-erite uru na Tous pụrụ iche ahịa maka gị inepo onyinye
por Susana godoy eme Ọnwa 9 .
Ọ bụrụ na afọ a ị chọrọ iju onye gị na forpo ,bọchị, ndị pụrụ iche ahịa nke Tous ga ...
Onyinye ngwa si Parfois ruo € 20
por Maria onyekwere eme Ọnwa 10 .
You na-achọ nkọwa dị ọnụ ala iji ju ndị ị hụrụ n'anya n'anya n'abalị iri na abụọ na-esote? Parfois emeela ndepụta maka ...
Chọpụta nchịkọta ngwa OI20 nke Sfera dere
Ekeresimesi na-abia, oge otutu anyi ji amakorita onyinye nke anyi na ndi kacha nso ...
Nchịkọta Pandora ọhụrụ maka ekeresimesi
por Susana godoy eme Ọnwa 11 .
Ọ bụ n'oge, anyị maara, mana anyị enweghị ike ichere ruo oge ikpeazụ n'ihi na ihe niile na-eme ọsọ ọsọ ma emechaa. Ya mere, ịga ...
Ndị na-emetụta ya "na-alụ ọgụ" maka ọmarịcha ụdọ eriri ekwentị
You chọrọ iyi otu ụdị dị ka ndị na-emetụta ya? Mgbe ahụ ịchọrọ otu ngwa ngwa kachasị ọhụrụ nke ga - enye gị nnukwu ...
Chọpụta nchịkọta ọhụrụ nke Pizpireta Complementos
por Maria onyekwere eme Afọ 1 .
N'oge na-adịbeghị anya anyị chọpụtara atụmatụ nke Pizpireta Complementos na Instagram. Ha dọọrọ uche anyị maka okwu ha wee merie anyị ma emesịa ...
Mango na-etinye ihe nkpuchi a na-eweghachi na katalọgụ ya
Omume anyị na-emegharị ihu na ọnwa ndị na-adịbeghị anya. N'ime ihe anyị maara ugbu a dị ka ihe ọhụrụ na ...
Ngwa Bershka na-enwu n'oge a
Agbanyeghị na uwe ejiji bụ nhọrọ niile anyị na-ele anya ugboro abụọ, tupu anyị ekpebie nhọrọ ọ bụla, ...